Ihe omimi: akwukwo nso. Ụzọ dị iche iche iji jiri GrabzIt
E nwere ọtụtụ nchịkọta weebụ na mmepụta ihe data na ịntanetị. Otú ọ dị, iwepụta data sitere na PDF dị iche iche na ibe weebụ adịghị mfe dị ka ọ dị ugbu a! Biko na-ahụ n'anya na ihu ọma, GrabzIt - otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mma na ndị a ma ama na net.
Ịmalite na GrabzIt:
E nwere ụzọ anọ kachasị esi jiri ngwá ọrụ weebụ a:
1. Jiri API ya:
Ị nwere ike iji API ga - ejikọta atụmatụ na ọrụ GrabzIt n'ime ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị. Nke a na-enye gị ohere ịnweta screenshots, weghara tebụl HTML, ma gbanwee vidio vidio n'ime GIF animated. I nwekwara ike iji API wepụ data sitere na akwụkwọ Okwu na PDF.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmepụta ọrụ ndị a haziri ahazi, chọrọ ịchọta nhazi ihuenyo, ma ọ bụ nwee atụmatụ iji weghara tebụl HTML, GrabzIt bụ nhọrọ ziri ezi maka gị. Ntube ihuenyo ntanetị na ntanetị dị mma na-enye gị ohere iwere ma chekwaa screenshots n'ime ihe nkeji.
3. Jiri plugins ya:
I nwekwara ike iji ngwa mgbakwunye GrabzIt iji mejupụta atụmatụ ndị e mere na mbụ na saịtị gị, blog ma ọ bụ usoro njikwa ọdịnaya.
4. Jiri nchịkọta weebụ ya ma ọ bụ ihe ntanetịime data:
Ụzọ ọzọ isi nweta GrabzIt bụ iji ya na-ewepụta ma ọ bụ nchịkọta data ma wepu data ọ bụla ị chọrọ..
Akụkụ nke GrabzIt:
1. Chọpụta ebe nrụọrụ weebụ:
Na GrabzIt, ọ dịịrị gị mfe ịchọpụta ihe mgbaru ọsọ ibe weebụ. Naanị ị ga-ebudata, wụnye ma megharịa ihe ntanetị weebụ a ma kọwapụta weebụsaịtị ma ọ bụ ngalaba nke blog ị chọrọ iwepụ data ahụ. Ọzọ, ị ghaghị ịhazi mgbe ịchọrọ ka a kpochapụ data gị ma ka GrabzIt mee ihe ndị ọzọ.
2. Kọwaa data iji wepụ ma ọ bụ kpochapụ:
Ọ dịkwa mkpa ịkọwa otú ịchọrọ ka a ga-ahazi data gị ka GrabzIt chekwaa mgbanwe ya.
3. Nchịkọta ngwugwu nchịkọta:
Nke a na-agụnye ịkọwa ụzọ ịchọrọ ka a kpochapụ data gị ma bufee ya. GrabzIt ga - enyere gị aka ịmepụta data gị ma ọ bụ ọdịnaya weebụ n'ụzọ ka mma.
Olee ụdị data a ga-ehichapụ?
GrabzIt nwere ike iwepu data site na akụkụ ọ bụla nke ibe weebụ. Ma ịchọrọ iwepụta ọdịnaya nke ihe HTML (dịka oge na oge), chọrọ inwe àgwà HTML, ma ọ bụ nwere mmasị n'ịchekwa ederede na PDF ma ọ bụ ụdị oyiyi, ị ga-eji GrabzIt!
Olee otú ọrụ ntanetị weebụ a si dị?
Ọ na-enye gị ohere ịhọrọ ma ọ bụ gosi ihe dị iche iche nke ibe weebụ ị nwere ike wepụ. Ozugbo ịhọrọ mpaghara ahụ, GrabzIt ga-emepụta okwu dị mgbagwoju anya ma kpochapụ ihe ndekọ ọ bụla maka gị. Ọ na-enyekwa gị ohere iji usoro na -emepụta okwu mgbe nile na azụ, na-enye gị nchọta chọrọ.
A na-enweta data ahụ n'ụdị Excel, CSV, JSON, XML, SQL na HTML, ị nwere ike ịchekwa data a ma ọ bụ na server MySQL ma ọ bụ SQL. GrabzIt na-abịa na ọkachamara n'ịntanetị dị ebube na-akpaghị aka na-emepụta ntụziaka nke ihe ị ga-ehichapụ na mgbe ị ga-ehichapụ. Ịchọghị mmemme ọ bụla ma ọ bụ ntinye ederede iji nweta ihe kacha mma na ngwanrọ a Source .